मन | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ असार ३१, बुधबार ०९:५८ गते
मान्छेको मन यो कस्तो वस्तु हो ? कसैले हेर्न सक्दैन, देख्न सक्दैन, समाउन सक्दैन, भेट्टाउन सक्दैन । यो दुई अक्षर मिलेर बनेको “मन” शब्दले अनुभव, संकल्प, इच्छा, दिल, चित्त, बोध र विचार गर्ने शक्ति भन्ने बुझाउँछ । के हो मन ? मनको विषयमा मलाई जान्न मन लाग्यो । बुझ्न मन लाग्यो । मन कहाँ छ खोज्न मन लाग्यो । मनको जन्म कहिले भयो ? आमाको गर्भमा हुँदा मन कस्तो अवस्थामा थियो ? मान्छेको जन्मसँगै जन्मने मन ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियभन्दा भिन्न हुन्छ मन । हावाभन्दा छिटो हुन्छ मन । प्रकाशभन्दा चाँडो हुन्छ मन । कतै जानको लागि मनलाई स्रोत साधनको जरूरी पर्दैन । घामजस्तै उज्यालो हुन्छ मन ।
रातजस्तै अँध्यारो हुन्छ मन । फूलजस्तै पवित्र हुन्छ मन । नालीजस्तै फोहर र अशुद्ध हुन्छ मन । ढुंगा भन्दा साह्रो हुन्छ मन । कपासभन्दा कोमल हुन्छ मन । हिउँभन्दा चिसो हुन्छ मन । आगोभन्दा तातो हुन्छ मन । बालकको मन, युवाको मन, वयस्कको मन, वृद्धको मन, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, पत्रकार, पुजारी, सेना, किसान, चोर, सिपाही, कसाहीको मन ।
खुसी भएको मन, दुःखमा पिरोलिएको मन । जितेको मन, हारेको मन, क्रोधित मन, आनन्दित मन के के हो के के मनको विषयमा बयान गरेर साध्य नै छैन । क्षणमा आफूसँग रहेको मन कति छिटो भाग्छ दौडन्छ, अधिनमा राख्न साह्रै नै कठिन हुन्छ । कहाँ पुग्छ मन, के मा बस्छ मन ? मन कहिल्यै थाक्दैन, बूढो हुँदैन । दैनिक ६० हजार विषवस्तु र वासनामा पस्छ, हेर्छ, बुझ्छ, घुम्छ, रमाउँछ, रिसाउँछ, दुःखसुखको महसुस गर्छ, एकैठाउँमा टिकिराख्न सक्दैन मन । कुनै स्रोत साधन र इन्धनबिना स्वतःस्र्फूत सञ्चालन हुने मनमा कति शक्ति हुन्छ कति क्षमता हुन्छ ? मनको रहस्य जानी नसक्नुको छ । मान्छेको दिमागले जस्तै कम्प्युटरले काम गरेझैँ विज्ञानले मनको प्रयोगलाई सावित गर्न सकेमा कति धेरै नयाँ आश्चर्य प्रमाणित हुने हो भविष्यको गर्भमै रहेको छ ।
गुण र अवगुण धेरै हुन्छ मनमा । झिंगाको जस्तो नभएर मान्छेको मन मौरीको जस्तै शुद्ध र पवित्र भैदिए कस्तो हुन्थ्यो होला ? स्वर्गसरह हुने थियो यो संसार । किरा वर्गमा पर्ने झिंगा र मौरीको आकार प्रकारमा थोरै फरक देखिए पनि उनीहरूको रुप, रंग र चालढालमा भने खासै फरक देखिँदैन । तर, दुवैले गर्ने कार्यप्रतिको भिन्नता भने आकास जमिनको फरक देखिन्छ । यी दुवै किराहरूमा कुन तŒवको प्रभावले गर्दा यति धेरै फरक परेको हो ? यो पनि वैज्ञानिकहरूको लागि खोजीको विषय बन्न पुगेको छ ।
ज्ञानेन्द्रिय र कमेन्द्रियलाई आफ्नो अधिनमा पारी काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारलाई मित्र बनाएर जीवनभर दौडने गर्छ मान्छेको मन । वस्तुको रुप, रंग, स्वाद, गन्ध, आवाज, आकार प्रकारप्रति आकर्षण र विकर्षण हुन्छ मन । वस्तुलाई ग्रहण गर्छ, भोग गर्छ र रस सकिएपछि त्यसबाट टाढा हुन्छ मन । मान्छेको मभित्रको मन कति स्वार्थी छ, कति लोभी, पापी, क्रोधी र अहंकारी छ ? बुझी साध्यै छैन ।
मेरो लागि, अरुको लागि र सबैको लागि फरकफरक बनिदिन्छ मन । आफ्नो सबै राम्रो र अरुको राम्रो हेर्न चाहँदैन मन ।
इन्द्रियको विकास हुनुपूर्व मन फूलजस्तै स्वच्छ र पवित्र हुन्छ । रिस, राग, लोभ, मोह, डाहा, इष्र्या र अहंकार देखिँदैन । शारीरिक विकासक्रमसँगै बिग्रन्छ मान्छेको मन । आखिर के ले बिगार्छ मन ? मान्छे मान्छेबीच एकआपसमा झगडा गराउँछ, दुश्मन बनाउँछ, विरोधी बनाउँछ, इश्र्यालु, लोभीपापी, चोरडाँका र हत्यारा बनाउँछ । त्यही मन दयालु, मायालु र सहयोगी पनि हुने गर्दछ ।
मान्छे स्वतन्त्र जन्मन्छन् र मृत्यु पनि स्वतन्त्रै रुपले हुने गर्दछ । बाँचुञ्जेल मान्छेले गर्ने क्रियाकलापहरू फरक हुन्छ । मान्छे जन्मने तिथिमिति थाहा हुन्छ, मर्ने दिन कुन हो थाहा हुँदैन । के गर्छ के गर्दैन मान्छेले । जीवन सधैँको लागि हो जस्तो गर्छ मान्छेले । के को लागि जीवन भन्ने प्रश्नहरूमा उत्तरहरू फरकफरक आउने गर्दछन् । मान्छेको विकासक्रमसँगै कति मान्छेको जन्म भयो र कतिको मृत्यु भयो ठ्याक्कै जोड घटाउ गर्न कठिन हुन्छ । धेरैमध्ये थोरै मान्छेको नाम इतिहासमा आउने गर्दछ । जसले जीवनमा सबैको हितमा काम गरेर गए मृत्यु पछि पनि उनीहरू सधैँको लागि अमर हुने गरेका छन् ।
अनुसन्धान र आविष्कारका थुप्रै कुराहरू पछि मान्छेले सुविधा पाउने विषयहरू प्रसस्तै भएका छन् । संसारका कुनै पनि भूभागहरू अब टाढा हुने भएन, मान्छेहरू नौलो र पराई पनि हुने भएन, सबै एउटै परिवारजस्तै हुने भयो । मान्छेको मन र बुद्धिले गरेको चमत्कार हो यो । महाभारतको लडाईं, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध र अरु धेरै युद्धहरू भए, कति देशको हारजित भयो कति धनजनको क्ष्तिविनास भयो, सुन्दासमेत काहलीलाग्दो र डरलाग्दो घट्नाहरूले हाम्रो मानसपटललाई डगमगाउने गर्दछ । यस्ता सबै साना ठूला घट्नाहरू मान्छेको मनबाटै विकसित घमण्ड र अहंकारकै स्वरुप हो भन्न सकिन्छ । मन अस्तित्वलाई हेर्ने आँखा हो । मन स्वयंलाई हेर्ने आँखा पनि हो । मन इन्द्रियसँग समाहित भएर बाहिरि भौतिक वस्तुमा टाँसिनुलाई पशुत्व हो भनेर भनिन्छ भने मनलाई भित्री आँखाको माध्यमद्वारा हेर्नुलाई मानवत्व भन्ने गरिन्छ ।
इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति मनमा हुन्छ । चेतन मन, उपचेतन मन र अचेतन मन मनको तीन स्वरुप हुन्छन् । होसपूर्वक काम गर्नु चेतन मन हो । मान्छेमा कहिलेकाहीँ उपचेतन मन र अचेतन मन पनि हावी हुने गर्दछ, पूर्वजन्मका अवशेषहरू जाग्ने गर्दछ र मान्छेमा पागलपन आउने गर्छ, ढुंगेयुगको जनावरपन पनि जाग्ने गर्छ । क्रोध, घृणा र दुश्मनीको विषले मान्छेलाई बर्बाद गरिदिन्छ । मान्छेको अमूल्य जीवन कसरी नरक बन्छ ? डर, चिन्ता र आशंकाको रोगले मान्छेलाई कसरी पागल बनाइ चित्तामा पु¥याइदिन्छ । बुझ्नै कठिन छ ।
कति अचम्मको हुन्छ मान्छेको मन । कसैले छुनचलाउनु पर्दैन, गालीगलौच गर्नुपर्दैन तर पनि मान्छे एकआपसमा डाहा गर्छ, इश्र्या गर्छ र जलन हुन्छ । मान्छेको एकआपसमा बोलीचाली बन्द हुन्छ । मनमा उठेको अग्निले मान्छे स्वयंलाई डढाउँछ, जलाउँछ र सखाप बनाइदिन्छ । किन यसो गर्छ मान्छे ? मान्छे आफ्नो मनलाई अधिनमा राख्न नसक्नु, काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारबाट मुक्त हुन नसक्नु नै यसको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । मान्छेभित्र रहेको हार्मोन र ग्रन्थीहरूको कारण राग र द्वेष पैदा गर्ने गर्छ । मान्छेको इन्द्रियलाई राग र द्वेषले प्रभाव पारिदिन्छ । मान्छेको मन पनि राग र द्वेषले बिगारिदिन्छ र आफ्नो मूल्यबाट वस्तुलाई टाढा बनाइदिन्छ । चाहेजस्तो नहुँदा मान्छेभित्र द्वेष उत्पन्न भई अहंकारले स्थान लिन्छ र मान्छेमान्छेबीच तनाव झगडा हुने गर्दछ ।
भनिन्छ मान्छेभित्र रहेको ८० प्रतिशत शक्ति क्षमता नकरात्मक सोचमा खर्च हुने गर्दछ । मान्छेको विचारले जीवन बन्ने गर्दछ । राम्रो विचारले मान्छेलाई राम्रो बनाउँछ र नराम्रो विचारले मान्छेलाई विगारिदिन्छ, सडाइदिन्छ र नास गरिदिन्छ । मान्छे प्रष्ट हुन जरूरी छ । मान्छे जे चाहन्छ त्यही हुन्छ । मान्छेको शत्रु स्वयं आफैँ हो । आफ्नो शत्रु आफैँ हो भने मन नै मान्छेको शत्रु हो । आखिर मान्छे शत्रु पनि आफैँ र मित्र पनि आफैँ रहेछ । हामीभित्र रहेको शत्रुमनलाई हटाउन, भगाउन र धपाउनका लागि सुशुप्त अवस्थामा रहेको मित्र मनलाई जगाउनु पर्ने रहेछ । ज्ञान, धैर्य र तपलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले तीर्थ मानेका छन् । जसको कारण मान्छेलाई सकारात्मक बनाउँछ ।
विषयको ज्ञान हुनु, सबै परिस्थितिमा संयमता कायम गर्नु, लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर लागि रहनुले मान्छेको आत्मालाई शक्ति दिने रहेछ । मनलाई शुद्ध, सफा र सकारात्मक बनाई, राख्नुलाई तीर्थको पनि तीर्थ हो भनेका छन् । शुद्ध भावले मान्छेलाई माथि उठाउँछ ।
मान्छेलाई माथि उठाउने र पतन गराउने दुवै काम मनले गराउने रहेछ । मौरीको जस्तो मन, फूल फुलेर सुगन्ध र फल दिने मन, रामको मन, कृष्णको मन, बुद्धको मन, क्राइष्टको मन, महावीरको मन, गान्धीको मनलाई उच्च कोटीको मनको रूपमा मानिन्छ । उच्चकोटीको मन भएका मान्छेहरू सबैको पूजनीय हुन्छन् । कौरवको मनले महाभारत जन्मायो । रावणको मनले लंका जलायो । मनलाई अधिनमा राख्नेहरू आफ्नो र सबैको हितमा काम गर्न सफल भए र सबैको हृदयमा रहन सक्ने भए । मनलाई खोज्ने क्रममा यिनै सेरोफेरोमा रहेको पाइयो मान्छेको मन । (र.न.पा.–१३, चितवन)
आइतबार १२५५ जनामा कोरोना संक्रमण, थप २५ जनाको मृत्यु
उडिरहेको हेलिकप्टरमा चिल ठोक्किएपछि
चेपाङ विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा सहकारीद्वारा शैक्षिक सामग्री
काठमाडौँ । नेपालमा आइतबार १२५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ३१...
बूढीगण्डकीले मध्यपहाडी लोकमार्ग अलपत्र
दीपज्योति सहकारीको साधारण सभा